Wasaaradaha iyo Hay’ado ay ka mid Tahay Wakaallada Biyaha Hargeysa ee Fulinaya Mashaariicda SDF oo lagu Wareejiyey Gaadiid + Sawirro | Hargeisa Water Agency
Wasaaradaha iyo Hay’ado ay ka mid Tahay Wakaallada Biyaha Hargeysa ee Fulinaya Mashaariicda SDF oo lagu Wareejiyey Gaadiid + Sawirro
Posted on October 30, 2014 Posted By: adminCategories: NEWS
Hargaysa (HWA)- Gaadiid cusub oo tiradiisu dhan tahay 16 baabuur, ayaa lagu wareejiyey shan wasaaradood iyo laba wakaalood oo fulinaya mashaariicda uu maalgalinayo Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF).
Baabuurtan oo noocooguna yahay Toyota Hillux Pick-up uu bixiyey Sanduuqa Horumarinta Somaliland, ayaa lagula kala wareegay xaflad lagu qabtay gudaha Wasaaradda Qorshaynta Qaranka maanta, waxa ka qaybgalay wasiirrada iyo agaasimayaasha wasaaradaha Xannaanada Xoolaha, Degaanka iyo Horumarinta reer Miyiga, Qorshaynta Qaranka, Beeraha iyo Khayraadka Biyaha iyo maareeyayaasha wakaaladaha Horumarinta Waddooyinka iyo Biyaha Hargeysa, kuwaas oo dhammaantood fulinaya mashaariic lagu horumarinayo shaqooyinka ay bulshada u hayaan. Sidoo kale, waxa madasha goob-joog ka ahaa masuuliyiinta Wasaaradda Maaliyadda iyo madaxda maamusha Sanduuqa Horumarinta Somaliland.
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, ahna Guddoomiyaha Komishanka Qorshaynta Qaranka iyo Guddida Maamulka Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) oo furay xafladda lagula kala wareegay gaadiidkan, ayaa sheegay in gaadiidkan ay isticmaali doonaan kooxaha mashaariicda maamulaya mashaariicda wasaaradaha iyo wakaaladaha dawladda fulinayaan si ay kormeer iyo dabogal ugu sameeyaan habsami u socodka Sanduuqa Horumarinta Somaliland.
“Gaadiidku waa wax aad muhiim ugu ah hawl-qabadka ama shaqada wasaaradaha, gaar ahaan wasaaradaha shaqadoodu ku xidhan tahay gobollada dalka, shaqaalaha wasaaradaheenna oo yar waxay ku kooban yihiin xarumaha wasaaradaha, markaas si looga hawlgalo gobollada waxa loo baahan yahay gaadiid, runtiina waxyaabaha shaqadeenna ragaadiya waxa ka mid ah gaadiid la’aanta. Sidaa darteed, 16-kan baabuur ee halkan ku sugani waxay wayn ka tari doonaan socodka shaqada wasaaradaha iyo hay’adahaas loogu deeqay,” ayuu yidhi Dr. Sacad Cali Shire.
Waxa kale oo uu masuuliyiinta wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo weliba darawallada lagu wareejiyey gaadiidkan kula dardaarmay inay iska xilsaaraan ilaalintooda, una xannaaneeyaan sida baabuurtooda oo kale.
Wasiir Sacad waxa uu u mahadnaqay dawladaha Boqortooyada Ingiriiska, Denmark, Norway iyo Netherlands oo uu sheegay inay si deeqsinimo leh ugu tabaruceen shacabkan Somaliland.
Dr. Sacad waxa uu faahfaahiyey sida shanta wasaaradood iyo labada wakaaladood u kala heleen 16-ka baabuur oo kaal ah sidan;
Wasaaradda Beeraha – 2 baabuur
Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta reer Miyiga – 3 baabuur
Wasaaradda Xannaanada Xoolaha – 3 baabuur
Wasaaradda Qorshaynta Qaranka iyo Horumarinta – 2 baabuur
Wasaaradda Khayraadka Biyaha – 2 baabuur
Wakaallada Biyaha Hargeysa – 2 baabuur
Wakaallada Horumarinta Waddooyinka – 2 baabuur.
Dhinaca kale, Wasiirrada Wasaaradaha Xannanada Xoolaha iyo Degaanka iyo Horumarinta reer Miyiga – Dr. Cadbi Aw Daahir iyo Marwo Shukri Ismaaciil Baandare, ayaa hadallo ay ka jeediyeen madasha uga mahadnaqay deeqbixiyayaasha taageerada ay la garabtaagan yihiin shacabka iyo dawladda Somaliland, isla markaana gaadiidkani wax wayn ka tari doono mashaariicda Sanduuqa Horumarinta ee fulinayaan oo ku kala jihaysan horumarinta xoolaha iyo degaanka.
Agaasimayaasha Wasaaradaha Beeraha iyo Khayraadka Biyaha – Cabdillaahi Ismaaciil Faarax iyo Cabdirisaaq Jaamac Nuur iyo weliba Maareeyaha Wakaallada Horumarinta Waddooyinka Somaliland Prof. Xasan Cali Cismaan, ayaa soo dhaweeyey deeqdan oo ay ku tilmaameen inay baahi wayn u qabeen si ay ugu fuliyaan mashaariic lagu siiyey inay ku sameeyaan xidhitaanka biyaha dooxyada si ay uga faa’iidaystaan beeralaydu, ballaadhinta biyaha ee magaalooyinka iyo samaynta waddooyinka waddanka.
Sidoo kale, Maareeyaha Wakaallada Biyaha Hargeysa Md. Ibraahim Siyaad Yoonis, ayaa ballanqaaday inay kaga shaqayn doonaan hawlaha fulinta mashruuca biyo-ballaadhinta caasimadda Hargeysa ee qaybta ka ah Sanduuqa Horumarinta Somaliland oo uu xusay inuu rajaynayo in lagu guulaysto.
Waxa kale oo xafladda hadallo ka jeediyey Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Maaliyadda Cismaan Cabdillaahi Saxardiid, madaxa xafiiska Somaliland ee Sanduuqa Horumarinta Mr. Anthony Njune iyo weliba Siciid Axmed Faarax oo ku hadlayey afka darawallada gaadiidkan cusub oo shaqada ku helay nidaam tartan iyo imtixaan laga qaaday ah, kuwaas oo dhammaantood tilmaamay muhiimada baabuurtani u leeyihiin fulinta mashaariicda waddanka ka socota si loogu guulaysto.